ပွင့်လင်း www.bible.com ။ Internet Explorer ကိုမသုံးပါနဲ့။. ပုံမှန်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ, ညာဘက်ထိပ်ခေါင်းစဉ်အတွက် sign up ပြုလုပ်ရွေးချယ်ပါ။. မိုဘိုင်းဝက်ဘ်စာမျက်နှာ, ထိပ်ခေါင်းစဉ်ထဲမှာကို Select လုပ်ပါ Men…
ဒါမှမဟုတ် Bible.com အပေါ်ထွက် Sign
ကြှနျတေျာ့အကောင့်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ကဘယ်လို. ပွင့်လင်း www.bible.com နေ့စွဲ web browser ကို (မက Internet Explorer) တစ်ခုဖွင့်နှင့်အတူ. box ထဲမှာသင်္ကေတပြကို Select လုပ်ပါ ထိပ်တန်းခေါင်းစဉ်အတွက်. မိုဘို…
Bible.com အပေါ်ပိုမိုမြန်ဆန်, ရိုးရှင်းတဲ့မရှိနိမိတ်လက္ခဏာအတွက်
မသင်္ကေတပြ. ဒီထက် data တွေကို download လုပ်နဲ့ပိုပြီးမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းတဲ့သမ်မာကမျြးစာဖတ်သူကိုအဘို့အ www.bible.com မှာ website တွင်လက်မှတ်ထိုးမထားပါနဲ့။ ဤသည်အဟောင်းများနှင့်နှေးကွေးကွန်ပျူတာမ…
Bible.com အပေါ်တစ်ဦးမေ့လျော့ password ကို Reset
မေ့လျော့ Password ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း Reset. ထိပ်တန်းခေါင်းစဉ်အတွက်ခုနှစ်တွင် Sign ကို Select လုပ်ပါ. မိုဘိုင်းက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပထမဦးဆုံး Menu ကို (သုံးလိုင်း) ကို select. ကို Select လုပ်ပါသင့်ရဲ့စကားဝှ…